Mamelively mpianatra lisea iray mitsikera ny governemanta ny fampitam-baovao mpanohana ny fanjakana Hongroà · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ireo fampitam-baovao ho tsy mahay mianatra sy "makorelina" i Nagy.
Voadika ny 16 Avrily 2019 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Español, Français, srpski, Ελληνικά, русский, čeština , Italiano, Swahili, English
Tantara nosoratan'i Tamás B. Kovács sy nadikan'i Anita Kőműves [ho amin'ny teny anglisy] ho an'ny fanaovan-gazety fanadihadiana tsy mpitady tombom-barotra, Atlatszo. Nivoaka teto ny endrika nasiam-panitsiana noho ny fifanaraham-piasana miaraka amin'i Global Voices.
Lasa nalaza i Blanka Nagy tao Hongria, tamin'ny ririnina faran'ny taona 2018- voalohan'ny taona 2019 lasa teo raha nikabary tao amin'ny fivoriana iray fanoherana ny governemanta izy, ka nandritra izany no nitsikerany ireo politisiana malaza noho ny teny tsy maotona fampiasan'izy ireo. Nisy akony tany amin'ireo mpisera media sosialy maro ny teny mahery nataony ary nalaza haingana ny lahatsary iray nahitana azy nikabary.
Fitaovana fampiasan'ny fampitam-baovao mpanohana ny governemanta hongroà ny fanaratsiana sy ny fandisoam-baovao. Efa novalian'ny olo-malaza sasany avy amin'ny fanoherana tamin'ny alalan'ny fitoriana ireto sehatra ireto any amin'ny fitsarana ny famotehan-daza fanaon'ireo. Araka ny lahatahiry azon'ny Atlatszo vao haingana, efa ampolony ny raharaha teny amin'ny fitsarana naharesy ireo seha-baovao mpanao propagandy ireto, ary efa in-109 ry zareo no nodidian'ny fitsarana hamoaka fanitsiana tamin'ny tantara navoakan-dry zareo tamin'ny taona 2018.